Akhriso: Diyaar Garowga Gobollada Ee Ku Aadan Maalinta Ciidda – Goobjoog News
U diyaar garowga ciidda ayaa si aad ah looga dareemayaa magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland waxaana camiran suuqyada magaalada.
Nuucyada kala duwan ee Kabaha iyo dharka ayaa la keenay Suuqyada magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland waxayna dadka ku mashquulsanyihiin gadashada dharka.
Waalidiinta ayaa ilmahooda u gadaya dharka Ciidda iyaga oo doonaya in ay ka farxiyaan caruurtooda iyaga oo intaas u dheer in loo iibiyo agabkii ay ku ciyaari lahaayeen.
Ganacsatada iibiya dharka ayaa Goobjoog News uga warramay sida uu yahay ciidaan dhaqdhaqaaqa Suuqyada Garoowe iyo isa bedelka u dhaxeeya sanadkan iyo kii hore.
Xasan Axmed Cabdi oo ka mid ah ganacsatada dharka iibisa ee Garoowe ayaa ka waramaya xaaladda Suuqa waxaa uuna yiri.
“Ciidda dhulka waa barwaaqo magaalada si wanaagsan ayaa looga ciidayaa waxaan helnay ciiddaan macaash badan “.
Deegaannada Puntalnad ayaa si weyn looga dareemayaa u diyaar garowga maalinta Ciidulfidriga oo foodda nagu soo heyso.
Magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa u diyaar garowga maalinta Ciidd, sidoo kale Suuqyada Burco ayaa waxaa laga dareemayaa mashquul ku aadan gadashada dharka.
Magaalada Burco ayaa waddooyinkeeda waxaa lagu arkayaa dadka oo raxan raxan u socda kuwaasi oo ku mashquulsan gadashada dharka iyo u diyaar garowga maalinta Ciidda.
Cabdiraxmaan Diiriye oo ka mid ah dadka isku diyaarinaya Ciidda ayaa Goobjoog News uga warramay isku diyaarintiisa ku aadan maalinta Ciidda.
“Waxaan isku diyaarinayaa maalinta koowaad ee Ciidda, waxaana gadanayaa dharkii aan ku tukan lahaa Salaadda Ciidda.
Guud ahaan gobollada Waqooyi ee dalka ayaa waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ku aadan isku diyaarinta maalinta Ciidda.
Suuqyada magaalada Kismaayo ee Xarunta Jubbada Hoose ayaa waxaa laga dareemayaa u diyaar garowgii ugu dambeeyay ee ku aadan maalinta Ciidulfidriga.
Suuqa ugu weyn Kismaayo ee dhanka ka nagacsiga ayaa xilligan waxaa ka jira Mashquul aad u baaxad weyn kaasi oo ay dadka isku diyaarinayaa Maalinta Ciidda.
Guud ahaan deegaannada Jubbaland ayaa waxaa laga dareemayaa u diyaar garowga Maalinta Ciidda taasi oo ay dadku isku diyaarinayaan.
Caasimadda maamulka Hirshabelle ayaa waxaa ka socda dhaqdhaqaaq xooggan oo ku aadan sida ay dadku iskugu diyaarinayaa maalinta Ciidda, sida uu noo sheegay Wariyaheenna Cusmaan Cabdalla Cusmaan oo ku sugan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/ Dhexe.
Waxaa ka jira Suuqyada Jowhar Mashquul badan oo dhanka Iibsiga dharka ah waxayna tilmaameen ganacsatada in si aad ah uu u kala socdo Iibsiga dharka.
Guud ahaan deegaannada Muuaamulka Hirshabelle ayaa waxaa ka soconaya diyaar garowga ciidda mana jirto wax dhibaato ah oo laga soo sheegayo.
Magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa ka soconayaa diyaar garowga Ciidda sida uu noo sheegay wariyeheenna ku sugan halkaasi Cabdirisaaq Al-cadaala.
Waxaa Suuqyada magaalada ka jira mashuuqlka dadka kuwaasi oo gadanaya dharka Ciidda iyaga iyo ilmahooda.
Ganacsiga Magaalada cadaado ayaa ah mid aad u kala socdo, waxaana sanadkan magaalada ku soo batay dharka Caruurta iyo Agabyada ay ku ciyaaraan.
Dhanka kale magaalda Dhuuso-mareeb ee caasimadda Gobolka Galgaduud ayaa iyadana waxaa ka soconaya diyaar garowga ku aadan maalinta Ciida.
Magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Baay ayaa waxaa ka soconayaa diyaar garowga Ciidda sida uu noo sheegay wariyeheenna ku sugan halkaasi Cabdulqaadir Warcaddeeye.
Deegaannada Maamulka Koofur Galbeed ee Soomaaliya ayaa waxaa laga dareemayaa soo dhoweynta Maalinta Ciidda.